1 JỌN 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1JỌ 4)
Ma ọ bụrụ na nkwusa ahụ asị na Jisọs esighị otu a bịa, ọ bụghị nke si nꞌebe Chineke nọ pụta. Ọ bụ nkwusa okwu ụgha ahụ, nke si nꞌebe onye iro Kraịst bịa. Unu anụla ihe banyere ọbịbịa ya. Ndị ozi ya jupụtara ụwa taa.
Nꞌihi na ndị a nile si nꞌime ụwa pụta. Ya mere, ihe ha na-ekwu okwu ya bụ nanị ihe banyere ụwa. Ụwa na-aṅakwa ha ntị.
Ndị enyi m, ebe ọ bụ na Chineke si otu a hụ anyị nꞌanya, anyị kwesịrị ịhụrịta onwe anyị nꞌanya.
Chineke bi nꞌime onye ọ bụla kweere, na nꞌime onye bụla meghere ọnụ ya kwupụta na Jisọs bụ Ọkpara Chineke. Onye dị otu a bikwa nꞌime Chineke.
Chineke nꞌọnwe ya kwuru sị, “Onye na-ahụ Chineke nꞌanya kwesịkwara ịhụ nwanna ya nꞌanya.”
1 JỌN 4:3
1 JỌN 4:5
1 JỌN 4:11
1 JỌN 4:15
1 JỌN 4:21